Maalinta: Ogast 27, 2018
Gaadiidka Socdaalka ee Golcuk
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay ka shaqeyneysaa sidii ay kor ugu qaadi lahayd taraafikada D-130. Dowladda Hoose ee Magaalada, oo ka shaqeysa isgoysyada isgoyska Gölcük Yüzbaşılar, ayaa si dhakhso leh u fulinaya mashruuca. Isgoyska ayaa hada hagaya nalalka taraafikada, [More ...]
Natiijada Dalbashada Dib-u-dhajinta Dib-u-dhajinta Nidaamka Isku-dhafan ee Sincan iyo Hasanbey
TCDD 2. Agaasinka Gobolka Sincan - Hasanbey Nidaamka Mashiinka Dib-u-noqoshada Qancinta La noqoshada Natiijada Tender Result Resins TC State Railways 2. Agaasinka Adeegga Iibsiga Gobollada (TCDD) [More ...]
Jaaliyadaha aan abuuri karin warshadahooda qaranku marnaba bilaash ma noqon karaan
Kareemka xiirashada iyo garka mashiinka xiirane. Quraac fadhiistay keeno shaaha Nutella, Lipton aad cabto, iyo waxaad cabbi keeno kafeega Nescafé, Turkey ee qoyska [More ...]
TCDD oo ku dhawaaqday taariikh cusub oo qandaraasle ah
Tareenka degdega ah ee dadweynaha Bursa ayaa sugaya muddo dheer, laakiin leh dulqaad weyn. Intaa waxaa u dheer, TCDD, oo u qaabaysay tareenka Gemlik helitaanka aagagga warshadaha ee Anatolia ee dekedda, waxaa soo qabanqaabiyay Aagga Wershadaha ee Bursa iyo Qaybta Wershadaha abaabulay ee Nilüfer. [More ...]
Dhamaystirka Dhamaadka Samsun-Sivas Qaybta Casriyeynta Casriga ah
Sebtember Sebtembar 2015'te ayaa xirmay oo daryeeshay khadka tareenka Samsun-Sivas (Thick) khadka tareenka ayaa la soo gabagabeeyey. Shaqooyinka waa la dhameystiray khadkana waxaa loo qorsheeyay inuu furmo bisha Sebtember ee soo socota. Khadadka tareenka ee Samsun-Sivas (Kalın) ilaa heerka ugu dambeeya ee shaqada [More ...]
966 Sacuudi Carabiya
Saldhigga Madiina, oo ah meeshii ugu dambeysay ee taariikhi ah ee Hijaz Railway, ayaa noqotay hoolka muusikada
Saldhigga Madiina, oo ah meesha ugu dambeysa ee taariikhiga ah ee Hejaz Railway, ayaa noqotay hoolka muusigga: Saldhigga Madiina, oo ah boosteejada ugu dambeysa ee Hejaz Railway, oo la dhisay xilligii Abdulhamid, ayaa hadda hawada furan ka dib markii looga tanaasulay masiirkeedii sannado. [More ...]
Dhibaatada Tareenka ah ee Tufan ee Kutahya 1 Injured
Degmadda Tavşanlı ee Kütahya, tareen xamuul ah ayaa ku dhacay booyad xamuul ah oo ka gudbeysay isgoyska heerka. Ahmet Bilal, oo ahaa darawalkii booyadda shilka shilka galay ayaa dhaawacmay. Dhacdadii shalay fiidkii, xarunta degmada Kütahya Tavsanli ee ku saabsan 4 [More ...]
Luqadaha American waxay ka hortagaan soo saarida maxaliga ah
Buuxiyey oo ka buuxa 25 sano ka shaqeeya Tareennada ee Gobolka, sida nolosha ka dib fariistay Stop Burhan ayaa waxaa ka go'an in ay hay'addan, waxa uu sheegay in Turkiga waa in ay soo saaraan tareen gaar ah. Durdu, oo soo jiidanaysa muhiimadda jidadka tareennada, maalgashiga TCDD [More ...]
Shirkadaha Domestic Sales oo Loogu Shubay Shisheeye ee Sannadka 10 ee ugu dambeeyay
Ganacsatada Turkiga waxay iibsadaan saamiyadooda suuqyada shisheeye iyo kuwa gudaha iyadoo la adeegsanayo dadaal dheer, shaqo, rasiidyo iyo maalgashi. Guddiga Tartanka, 2016'da 107 shirkadda Turkiga ee ay ka helaan shirkadaha shisheeye [More ...]
Maadooyinka Metro iyo Tram ee Izmir
Qayb ka mid ah nidaamyada tareenka ee gaadiidka dadweynaha ayaa si tartiib tartiib ah ugu kordhaya magaalada İzmir. Iyada oo qorshuhu yahay xilli dugsiyeedka deyrta ee loo xilsaarayo furitaanka iskuulada, tirada duulimaadyada ee Izmir Metro waxay hoos ugu dhici doontaa daqiiqadaha 3,5 inta lagu gudajiro saacadaha ugu sarreeya. 6 ee Tramway Konak [More ...]
3 oo ka socda IETT. Mucaawin Leyris leh Lahaansho Madaarka
Agaasinka Guud ee Hawlaha IETT, Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul, qandaraaska loogu talagalay Gaadiidka raaxada ee ay wataan boorsooyinka ayaa la bilaabay. Shirkadda 4 10, oo ku guuleysan doonta qandaraaska la qabanayo bisha Sebtember iyada oo la raacayo hanaan jilicsan [More ...]
RayHaber 27.08.2018 Warbixinta Shirka
Dhameystirka Howlaha ka maqnaa Xadka Boğazkörü-Toprakkale Mashruuca Korantada Qeybta VI
Cayirova iyo Fatih Train Stations Wareegyada Xidhiidhka Shaqada Dhismaha Ganaaxa Ganacsiga
Çayırova iyo Fatih Stations Stations Xiriirinta Wadooyinka Dhismaha Wadatashiga Natiijada Tijaabada Dhibcaha 2018 / 359895 GCC qiimaha xaddidan ee Adeegyada Taageerada Dawladaha Hoose ee Magaalada Kobaneli 5.060.618,67 TL iyo qiimaha ugu sareeya ee 7.716.430,00 TL [More ...]
28 Thousand Square Meter Lock Locking
Agaasinka Guud ee MASKI, iyada oo loo eegayo mashruuca 154 ee derisnimada, dhammaystirka shaqada kaabayaasha ee xaafadaha Çeşneli Alaşehir 28 kun oo mitir murabac oo dhagax dhiga furaha ah ayaa bilaabay inuu shaqeeyo. Maamulka Manisa Biyo iyo bullaacadaha [More ...]